Hhayi okuningi kunjengokubonakala esithwalwa efulethini. Lezi zinambuzane ecasulayo kungaba isikhathi eside ujikeleza uzungeze umuntu futhi kukunenge. Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi ingaba umthombo abathwali izinhlobo eziningi zama-bacterium. Ngemva ihlezi ebhakedeni udoti, Midge uhlezi isinkwa noma ushukela, iqalisa etafuleni. Ngakho-ke ashalazele ukuvela lezi zinambuzane akudingekile.
Indlela ukuqeda izintwala?
Into yokuqala okumele uyenze - ukuthola isidleke sazo. Ngokuvamile avuse ukuvela esithwalwa abolile imikhiqizo organic: imifino, izithelo, ukudla isigamu zidliwe. Qala ukuhlolwa ikhishi amakhabethe nge okusanhlamvu nakwezinye izindawo isitoreji ukudla. Bheka emasakeni futhi iziqukathi imikhiqizo, hlola yokugezela. Midge uyasinda kahle ezindaweni ezimanzi, yena uthanda ukufihla igobolondo lemifanekiso, okuyinto aqoqana kanye rots othola khona emva ukuwasha izitsha. Of izinsensane ekhishini, kanjani ukuqeda? Hlanza amashubhu esebenzisa amakhemikhali usebenzisa plunger. Ungakhohlwa kudoti bawashe futhi zokukhipha igciwane.
Enye indlela ukuqeda izintwala: Ungakwazi aphathe indlu lisho ukumelana izinambuzane ezindizayo. Nokho, ingabe kufanele yenziwe yini ngokuqapha ukuze singathwesi azilimazile. Uma isinambuzane wakhethwa Igumbi yezingane, ukusetshenziswa amakhemikhali Yiqiniso, akunakwenzeka. Kungcono ukwenza yena bevalelekile. Thatha imbiza ingilazi, ngiyibeke ngaphakathi lolo. Obtyanite ifilimu entanyeni izimbiza ukwenza izimbobo ambalwa ifilimu. Lapho esithwalwa ebhodweni luyakha okuningi, nje ulilahle.
amathiphu ezimbalwa nje ukuqeda izinsensane kulo indlu: uzihlanganisa tape. Ungasebenzisa "kugasela" noma "dichlorvos". Etafuleni lasekhishini ne ipuleti ukubeka uviniga noma walala amagatsha kanye ziyadliwa isikhumba. Kukhona amakhambi abantu ukuqeda izintwala. Abanye besifazane bayisebenzisa borax ukubulala lezi zinambuzane, Amahlumela omisiwe wabeka umhlonyane.
Hizinisi efulethini - kanjani ukuqeda lezi izinambuzane eziwuhlupho? Ikhambi elingcono kakhulu le - kuyinto zokuvimbela. Inhlanzeko endlini, ukususwa esifike udoti, ukuhlanza itafula abese egeza izitsha ezingcolile uzokhulula ifulethi, hhayi kuphela ukubonakala izintwala, kodwa nezinye izinambuzane.
Thanda izinsensane siphile kanye nemibala yayo. Ikakhulukazi uma ezimbizeni amanzi unaphakade phansi.
Zama ukugcwalisa lesi simila.
Kakhulu ezilimele futhi izimbali abathintekayo kusadingeka ukuba kulahliwe.
Ungagcwalisa phezulu imibala amatshe noma zasolwandle encane.
Ukunisela ngamanzi umkhiqizo kokuncinyane potassium permanganate.
Kuyasiza indlela abantu abanjalo sika elwa njengoba bevaleleke esiminyaminyeni amakhanda phansi umdlalo.
Uma le ndlu isesimweni esibi manzi, inisele izitshalo itiye eqinile izosebenza, futhi.
Ungagxambukeli imbali Ukufakelwa ebhodweni entsha nomhlabathi fresh.
Wesaba Midge orange ikhasi emhlabathini.
Ungakwazi nisela isixazululo isitshalo garlic noma nje unamathele ekhanda lakhe walihlanganisa nomhlabathi phansi.
ukubhema ka esithwalwa
Thela hot emganwini oyincence camphor bese ulinda kuze umusi iqala ukusika. Khona-ke udinga ukuya nale umthamo red-hot emakamelweni. Le iphunga nje ubulala izinambuzane, kodwa indoda zibangele noma iyiphi umonakalo bengayi. Ngikufisela inhlahla!
Ingubo kwesitayela: yemfashini